Ingubo Yenkhali Yesifundeni se-Western Cape
Western Cape Province Coat of Arms
Ingubo yenkhali yemfunda etja yesifunda se-Western Cape yavunywa yiPalamende yesifunda ngonyaka ka-1998.
Ingubo yenkhali le yatlanywa ngu-Fred Brownell, ngemva kokobana enze irhubhululo ngeqophelelo bewathintana nabajameli benhlangano zoke zepolotiki abasePalamende yesifundenesa. Izinto ezisetjenziswe ekwenzeni ingubo yenkhali yesifundesi zakhethelwa bona zitjengise ukwehluka kwesifundesi sange-Western Cape.
Ingubo yenkhali yesifundesi ngaphasi ihlaza kwesibhakabhaka okujamele intaba i-Table Mountain, kanye nokuhluka kwemvelo kwesifundesi se-Western Cape. Khona ngaphasapho lapha kunombala ohlaza kwesibhakabhaka lapha kunesiba letje kunesiqubulo esitlolwe bona yi-SPES BONA – okutjho bona ithemba elihle. Isiba letje lijamele i-Little Karoo.
Ukusuka phasi kunekhande, elimumethe i-anchor, isiqubuthu samadireyibe asesentha kanye nomjeka owenziwe ngedaka.
I-anchor ijamele ithemba, ukunzinza, kanye nomlando welwandle wesifundesi. Amadireyibe ajamele ukuqakatheka kwezelimo kanye nokukhiqizwa kwewayini esifundeni se-Western Cape. Umjeka wedaka wona uliphawu lokukhiqiza nokobana yayenziwa babantu ekhabe bahlala esifundenesi kade, abathwa/-khoi.
Ikhande lisekelwe yisilwane i-Quagga (Equus quagga quagga), zendabuko zesifundesi kanye ne-Bontebok (Damaliscus dorcas dorcas), kodwana irhubhululo lisenziwa elenzwe ngomncopho wokukhiqiza umhlambi omutjha wazo ngombana inlwane zomhlobo we-bontebok lezi sele ziphela.
Phezulu kwekhande kunomqhele omncani, owenziwe ngomncamo, njengombana kade khabe wembathwa babathwa, njengethuthumbo i-protea elijamele i-fynbos etholakala esifundenesi kanye namaringhi ajamele ubuhle besifundes, ngombana akunasithomo nanyana isiphetho. Ingubo yenkhali etja ingezelela ukwaziwa kanye nesithunzi sesifunda se-Western Cape.